यो हो तेह्र सय फिट उचाईमा बनेको विश्वकै सबैभन्दा खतनाक होटल (फोटोफिचर), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
यो हो तेह्र सय फिट उचाईमा बनेको विश्वकै सबैभन्दा खतनाक होटल (फोटोफिचर)
डिसी नेपाल , २० श्रावण २०७५
एजेन्सी । मानिसले धर्तिमा कयौँ अद्भूत चीज निर्माण गरेका छन्, जसका बारेमा मानिसले कल्पला समेत गर्न सकेको हुँदैन्। आज हामी तपाईलाई मानिसले निर्माण गरेको सबै भन्दा खतनाक होटेलका बारेमा जानकारी दिदैछौँ। जुन देख्दा पनि मुटु काप्ने खालको छ।
पेरु, साउड अमेरिकाको एक सुनसान स्थानमा बनेको स्काइलज होटल एक यस्तो निर्माण हो, जसलाई विश्वकै खतनाक होटल मानिने गरिन्छ। यो होटल करीब तेह्र सय फिट उचाईको पहाडमा बनेको छ। जुन होटलमा बस्न किनै खतनाक मानिने गरिन्छ। तर पनि त्यहाँ पर्यटकको निकै भिड लाग्ने गर्दछ।
जुन उचाईमा यो होटल निर्माण भएको छ, त्यहाँसम्म पुग्न निकै मुश्किल पर्ने गर्दछ। यो होटलमा पुग्ने दुई तरिका रहेका छन्। पहिलो जिपलाइकको मद्दतमा पुग्न सकिन्छ। जुन यस्तो लाइन हो, जसमा दुई पहाडलाई एक अर्कासँग जोडनका लागि बलियो तार लगाइने गरिन्छ। जसबाट व्यक्ति एकबाट अर्को पहाडमा पुग्ने गर्दछन्।
दोस्रो पहाडको किनारमा बनेको १३०० फिट मेटलको सिढी चढेर त्यस होटलमा पुग्ने गरिन्छ। यो होटल क्याप्सुलको आकारको छ। होतल २४ फिट लामो, ८ फिट चौडाई र ५ फिट उचाईको छ। यस होटलमा चार वटा बेड एउटा बाथरुम र डाइनिङ रुम बनाइएको छ।
त्यहाँ पुग्ने व्यक्तिले पहाडको सुन्दर देख्न सकुन भनेर चारै तिर ट्रान्सपेरेन्ट लगाइएको छ। यस होटलको एक दिनको भाडा करिब ३२ हजार रुपैयाँ रहेको छ।